Haweeney dacwad faraxumeyn ka gudbisay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump | Warsugan News
Home Wararka Haweeney dacwad faraxumeyn ka gudbisay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump
Haweeney dacwad faraxumeyn ka gudbisay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump
Dacwadan bahdilka ah ayay Summer ku shaacisay shir jaraa’id oo ay qabatay ayaa sheegtay in uu Trump yahay “beenaale iyo mid haweenka u daran” uuna iyada “sumcadeedii hoos u dhigay si xaqdarro ahna uu u eedeeyay”.
“Maadaama oo Trump uusan ka laabanin hadalkiisa, sidii aan ka codsay, iima uusan banaynin jid aan ahayn in aan dacweeyo si aan madmadawga uga saaro sumcadayda” Summer ayaa sidaa u sheegtay saxafiyiin ay kula hadashay Los Angeles.
Waxaa shirkaasi jaraa’id ku wehelisay qareenkeeda Gloria Allred oo ah gabadh u ol’olaysa xisbiga dimuqraadiga.
Madaxwaynaha la doortay ayaa “been” ku tilmaamay eedaymahaas wuxuuna wacad ku maray in maxkamad la tiigsan doono dumarka eedeeyay.
Previous articleDaawo:Gudoomiyaha Cusub Ee Gobalka Maroodi-Jeex Oo Hada Ka Dareen Celiyey Xilka Loo Magacaabey
Next articleObama oo qabtay shir jaraa`idkiisii ugu dambeeyay iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump oo uu u digay